Ukuhlala kwiDolophu kunye nokuJongwa kweLizwe - I-Airbnb
Ukuhlala kwiDolophu kunye nokuJongwa kweLizwe
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguPeter And Viv
Siphinde savuka sibaleka emva kokuba sithuthile indlu. Indawo yethu ngoku kukuhamba ngomzuzu omnye ukusuka kuhola wendlela 2 kunye nokuhamba nje kwemizuzu emi-4 ukusuka edolophini. Sinombono othandekayo ngaphaya koluhlu kunye nokuhla kwitrafikhi kuhola wendlela.
IWaipukurau yidolophu exakekileyo yelizwe eneentlobo ngeentlobo zeekhefi, iindawo zokutyela, iivenkile, indawo yokuqubha eshushu kunye neengoma zokukhwela ibhayisekile. Yiza uphumle, uphonononge kwaye wonwabe. Sibandakanya nesidlo sakusasa ukuze uvuke kwaye uhambe imini.
Sinendawo yekonkile ngaphakathi kocingo kwaye ngaphandle nje komnyango wangaphambili ukuze upake isithuthi sakho kwaye akukho zinyuko zokunyuka. Izitrato ezininzi ezinikezela ukuhamba ngokukhululeka kunye nendawo ekhuselekileyo. Sinekati enye enobuhlobo.
Siphezu kwenduli kwaye sinembono ethandekayo yohola wendlela, iinduli kunye nodederhu.
Asijongi kwizindlu zabamelwane, koko kwiigadi zabo ngoko bazive bebucala kakhulu.
Sisekupheleni kwe-cul de sac ngoko ke ukupaka akuyongxaki.
Umbuki zindwendwe ngu- Peter And Viv
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waipukurau